လွယ်ကူသော Marinara Sauce - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ချောကလက်ရေခဲမုန့်နှင့်အတူချောကလက်ထူ milkshake စာရွက်
လွယ်ကူသော Marinara Sauce
Marinara Sauce သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောခေါက်ဆွဲများကိုထိပ်ဆုံးသို့တင်ရန် (သို့) အဖျော်ယမကာစားရန်ခေါ်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများတွင်သုံးရန်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
ကြက်သွန်နီနှင့်ကြက်သွန်ဖြူများပါ ၀ င်သည့်ခရမ်းချဉ်သီးများ (တစ်ခုလုံးနှင့်ကြေမွနေသော) သည်အကောင်းဆုံး marinara ငံပြာရည်ကိုဖြစ်စေသည်။ ဤရိုးရှင်းသောငံပြာရည်သည်မိနစ် ၃၀ ထက်မကြာသောကြောင့်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၅ ရက်ထားရှိပြီးအေးခဲသွားသည်။
အိမ်လုပ် Marinara Sauce သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူပါသည်။ အရည်ရွှမ်းသောခရမ်းချဉ်သီးများသည်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌အကောင်းဆုံး marinara ငံပြာရည်ကိုရရှိရန်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်မွှေးကြိုင်သောရနံ့များဖြင့်ရောထွေးထားသည်။
Marinara Sauce ဆိုတာဘာလဲ
Marinara Sauce သည်အနည်းငယ်သာပါဝင်သည့်ရိုးရိုးခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခရမ်းချဉ်သီး၊ မွှေးကြိုင် (ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ) နှင့်အချို့သောရာသီများ။ ၎င်းသည်ခေါက်ဆွဲများ၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ နစ်မြုပ်သည့်ငံပြာရည်သို့မဟုတ်သင်၏ချက်ပြုတ်နည်းများတွင်ဖျော်ရည်ဆော့စ်များကိုစုံလင်သောအစားထိုးအဖြစ်အသုံးချသည် (ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုစကတ်ပြားဆပ်ပြာဖြင့်အစားထိုးအသုံးပြုသည်)!
သငျသညျအံ့သြစေခြင်းငှါ, spaghetti ငံပြာရည်နှင့် marinara အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ ? နှစ်ခုအကြားကွာခြားချက်မှာ marinara သည်ခရမ်းချဉ်သီးများနှင့်ရာသီဥတုသာဖြစ်သည်။ spaghetti sauce သည်အမဲသားနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီးသည်အက်စစ်ဖြစ်နိုင်သည် (အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍)၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤမုန့်ညက်တွင် tart နှင့်ဖျက်စီးထားသောမုန်လာဥထည့်ခြင်းသည်ချိုမြိန်စေပြီးသကြားဓာတ်အများစုကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ သင်မည်သည့်ခရမ်းချဉ်သီးကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ မူတည်၍ သင်၏အချဉ်ဓာတ်အချို့ကိုဖြတ်တောက်နိုင်ရန်သင်၏ marinara ငံပြာရည်တွင်သကြားအနည်းငယ်သို့မဟုတ်နည်းသောသကြားထည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ သင်ပိုနှစ်သက်ပါကသကြားအနည်းငယ်ထည့်။ မုန်လာဥနီကိုကျော်သွားနိုင်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးလုံးကိုကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဥယျာဉ်မှလတ်ဆတ်သောခရမ်းချဉ်သီးများကိုလည်းထည့်လေ့ရှိသည် (သေချာပါစေ။ သင်၏ခရမ်းချဉ်သီးများကို ဦး စွာဆေးကြောပါ ) ။ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးလုံးကိုလက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဇွန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းအကောင်းဆုံးကိုက်ညီမှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည်။ ငါစည်သွတ်ဆေးကြောထားသောခရမ်းချဉ်သီးကိုကြိုးစားခဲ့သည်နှင့်သူတို့တူညီသောရလဒ်များကိုမထင်ကြဘူး။
ငါ Marineara Sauce ကိုသုံးပြီးအိမ်လုပ်အသားဆော့စ်ပြုလုပ်ရန်အခါအားလျော်စွာငါဖျက်စီး zucchini သို့မဟုတ်အစာကြေသည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဲ့သို့သောအရာများကိုထည့်ချင်သည်!
Marinara Sauce ပြုလုပ်နည်း
Marinara ငံပြာရည်သည်မိနစ် ၃၀ အတွင်းလုပ်ရန်အရသာရှိပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူသောပန်းကန်ဖြစ်သည်။
သေးငယ်သောကြက်သွန်နီများနှင့်မုန်လာဥနီများကို ဖျက်၍ ဒယ်အိုးတွင်ပျော့ပျောင်းစေသည်။
သင်၏ marinara ငံပြာရည်ကိုမိနစ် ၂၀ မျှမျှအောင်ထားပါ။
သင်ကခေါက်ဆွဲငံပြာရည်အဖြစ်သုံးလျှင်သင်၏ငံပြာရည်အနည်းငယ်ပိုပါးအောင်သေချာအောင်လုပ်လိုသည်။ ပီဇာ သို့မဟုတ်တစ် ဦး သို့ကျဆင်းလာအဖြစ်။
သင်၏ marinara ငံပြာရည်ကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်၎င်းသည်လေလုံသည့်ကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၅-၇ ရက်ခန့်ကြာရှည်ပါလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်က၎င်းကိုတစ်နှစ်တည်းအထိအရွယ်အစားဖြင့်အေးခဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးလိုအပ်သည့်အနေဖြင့်လည်းရေခဲနိုင်သည်။
Slow Cooker Spaghetti Bolognese - ဒါအရသာ !!
ပျိုးပင် Basil Pesto - လတ်ဆတ်သောဥယျာဉ်ကို !!
ခရမ်းချဉ်သီးကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ - မီးဖိုချောင် Hack
ခရမ်းချဉ်သီး Pie - နွေရာသီအကြိုက်ဆုံး!
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ ခွက် စာရေးသူHolly Nilsson Marinara Sauce သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောခေါက်ဆွဲများကိုထိပ်ဆုံးသို့တင်ရန် (သို့) ဖျော်ရည်ပုဇွန်ဆော့စ်ကိုခေါ်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများတွင်သုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသောခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၃ ဇွန်း သံလွင်ဆီ
▢၁ ခွက် ကြက်သွန်နီ ထုထည်
▢⅓ ခွက် မုန်လာဥနီ ဖျက်စီး
▢၃ ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့် minced
▢¼ ခွက် လတ်ဆတ်သောပင်စိမ်း ကုန်တယ်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း oregano ခြောက်
▢၂၈ အောင်စ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံး စည်သွတ်ဘူး
▢၂၈ အောင်စ ကြေမွခရမ်းချဉ်သီး စည်သွတ်ဘူး
▢နှစ် ဇွန်း ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ
▢၁-၂ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သကြား (ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်)
▢½ ခွက် ရေ
အိုးကြီးတစ်လုံးတွင်သံလွင်ဆီကိုအလယ်အလတ်အပူဖြင့်အပူပေးပါ။ ကြက်သွန်၊ မုန်လာဥနှင့်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါ။ ပျော့ပျောင်းသည်အထိချက်ပြုတ်,5မိနစ်။
(အသီးဖျော်ရည်နှင့်) ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးလုံးထည့်ပြီးဇွန်းနှင့်ညင်ညင်သာသာခွဲပါ။ ကျန်ရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်မွှေပေးပါ။
အပူနည်းနည်းဖြင့်မိနစ် ၂၀ သို့မဟုတ်ငံပြာရည်သည်လိုချင်သောကိုက်ညီမှုကိုမရောက်မှီမျှတည်ထားပါ။
သင်ဝယ်ယူသောခရမ်းချဉ်သီးတံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ သကြားလိုအပ်နိုင်သည်။
သော့ချက်စာလုံးmarinara ငံပြာရည် သင်တန်းအဓိကသင်တန်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အီတလီ© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ဤလွယ်ကူသော PASTTA ဆော့စ်ကိုဒီမှာပြန်ဖတ်ပါ